Edere site Tranquillus | Nov 23, 2021 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
Usoro nkwanye ùgwù iji zere na njedebe nke ozi-e
Ahịrịokwu na-abaghị uru, usoro na-adịghị mma, ndebiri ma ọ bụ nchịkọta usoro… Ndị a niile bụ ojiji na njedebe nke mail nke kwesịrị ka a gbahapụ ya. Ị ga-enweta ọtụtụ ihe site na itinyekwu aka na usoro na njedebe nke email ahụ. Mmezu nke ebumnobi ndị kpalitere nhọrọ nke ide ozi-e dabere na ya. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ onye na-ezigara email mgbe niile maka ọrụ, akụkọ a bụ maka gị. Ị ga-emeziwanye nka nzi ozi gị.
Ụfọdụ ihe atụ nke usoro nke ị na-ekwesịghị ịhọrọ ya
Ọ dị mkpa ịkwanye akpaokwu dị mma na njedebe nke email, mana ọ bụghị naanị nke ọ bụla.
Usoro ndị a na-ahụkarị ma ọ bụ jiri ahịrịokwu na-enweghị isi mejupụtara
Ịmecha ozi-e ọkachamara na usoro ntinye aka na-enye onye na-ezipụ ihe nkwa nke ịgụ na ime ka onye nnata ya mara ihe a na-atụ anya ya n'aka ya. Otú ọ dị, site n'ịnabata nkebi ahịrịokwu na-enweghị atụ dị ka: "Ịnọgidere n'aka gị maka ozi ọ bụla ọzọ...", enwere ohere dị ukwuu na agaghị agụ ya. N'ezie, ọ bụ ihe a na-ahụkarị.
A ga-ezerekwa okwu ọma na njedebe email nke nwere ahịrịokwu na-enweghị isi. Ọ bụghị naanị na ha anaghị atụkwasị ozi ahụ uru ọ bụla, ha na-adị ka enweghị isi ma nwee ike imebi onye zitere ya.
Usoro adịghị mma
N'ewezuga ọnọdụ nchịkọta akụkọ, ọtụtụ nchọpụta akwadoro na usoro na-adịghị mma nwere mmetụta na uche anyị. Kama nke ahụ, ha na-akwali ime ihe a machibidoro iwu kama izere ya. N’ihi ya, okwu nkwanye ùgwù dị ka “Biko kpọọ m” ma ọ bụ “Anyị agaghị ada ...” bụ ihe na-adịghị adọrọ mmasị nke ukwuu, ọ pụkwara inwe mmetụta dị iche.
GỤỌ Mpempe akwụkwọ ozi iji kọọ mmejọ na ụgwọ ọnwa gị
Formula n'ụdị mkpokọta
Ha na-ekwu, ịba ụba nke ezi ihe adịghị emerụ ahụ. Ma gịnị ka anyị na-eme na Latin a maxim "Virtus stat in medio" (Virtue in the middle ground)? Ọ dị mma ịsị na enwere ike ịhọrọ usoro nkwanye ùgwù na ọnọdụ, mgbe ha na-agbakọta, ha nwere ike ịmalite ngwa ngwa.
N’ihi ya, e kwesịrị izere okwu ọma ndị dị ka “Lee gị n’oge na-adịghị anya, nwee ezigbo ụbọchị, n’ịdị mma” ma ọ bụ “Ụbọchị dị nnọọ mma, n’ụzọ nkwanye ùgwù”. Ma mgbe ahụ, olee ụdị nkwanye ùgwù ịmụta?
Kama, họrọ maka okwu ọma ndị a
Mgbe ị na-eche nzaghachi sitere n'aka onye nta akụkọ gị, ihe kachasị mma bụ ịsị: "Biko na-echere nloghachi gị..." Okwu ọma ndị ọzọ iji gosi nnweta gị, "Biko mara na ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị" ma ọ bụ "Anyị na-akpọ gị òkù ịkpọtụrụ anyị".
A ga-eji okwu ọma dị ka "Ndị enyi" ma ọ bụ "nwere ezigbo ụbọchị" mgbe ị maralarị gị na onye nnata gị na-ekwurịta okwu.
N'ihe banyere okwu nkwanye ùgwù "Eziokwu" ma ọ bụ "Nnọọ obi ụtọ", ha dabara maka ọnọdụ ndị gị na onye na-emekọrịta ihe kwurịtarala ọtụtụ oge.
Banyere usoro nkwanye ùgwù "Eziokwu," ị kwesịrị ịma na ọ bụ nnọọ enyi na enyi na nkịtị. Ọ bụrụ na ị hụtụbeghị onye nnata, usoro a ka nwere ike iji nke ọma.
Ọgwụgwụ mail, usoro nkwanye ùgwù ịhapụ Nọvemba 23, 2021Tranquillus
gara agaHọrọ usoro nkwanye ùgwù na-ejikọta ntinye aka na ọkachamara
-esonụIhe iyi egwu nke mwakpo mgbapụta na France na Germany nke ANSSI na BSI hụrụ